पाल्पामा दुई संक्रमितको मृत्यु – Dainik Lumbini
पाल्पामा दुई संक्रमितको मृत्यु
१२ घण्टामा दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रम्भा गाउँपालिका वडा नंं. ३ पिपलडाँडाका ७८ वर्षीय पुरूष र रामपुर नगरपालिका वडा नंं. १० गेझाका ७२ वर्षीय पुरूष रहेका छन् ।
दुबै मृतकमध्ये रम्भा ३ पिपलडाँडाका ७८ वर्षीय पुरूषको मिसन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो भने रामपुर १० गेझाका ७२ वर्षीय पुरूष अस्पतालको उपचारपछि घरमा क्वारेनटाइनमा बसेका थिए । दुुबै जनाको कोरोना संक्रमणको रिपोट पोजेटिभ रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले बताए ।
पाल्पामा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । दुबै संक्रमित पुरूषहरूको शव पारिवारिक सदस्यहरूले व्यवस्थापन गरेका छन् ।
थपिए एकै दिन ९३ संक्रमित
पाल्पामा एकै दिन ९३ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । पीसीआर प्रविधिबाट ७३ जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट २० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । पाल्पा यति धेरै मात्रामा कोरोना संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो । ९७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ७३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
पाल्पामा पीसीआर परीक्षणको ७५ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । सोमबार मात्र पीसीआर परीक्षणमा पुरूष ४७ जना, महिला ३६ जना र एन्टिजेन परीक्षणमा १२ जना महिला र ८ जना पुरूष गरी ९३ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
परीक्षणको क्रममा ७५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिनु संक्रमण दर भयावह भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । तानसेन नगरपालिकामा मात्र ५६ जनामा संक्रमित पुष्टि भएको छ ।
पाल्पामा पछिल्लो समयमा एक हप्ताको अवधिमा ५ सय ८ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जसमा ३८ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने ४ सय ७० जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन् । पाल्पाका १० वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै तानसेन नगरपालिकामा मात्र २ सय ३६ जना, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा ७८ जना, माथागढी गाउँपालिका ३९ जना, रामपुर नगरपालिकामा ३८ जना, बगनासकाली गाउँपालिकामा ३४ जना, पूर्वखोला गाउँपालिका भित्र २३ जना, रिब्दीकोट गाउँपालिका भित्र २१ जना, तिनाउ गाउँपालिका भित्र २० जना, रम्भा गाउँपालिका भित्र १० जना र निस्दी गाउँपालिका भित्र ८ जना सक्रिय सक्रमित रहेका छन् । पाल्पामा अहिलेसम्म ४२ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । मृतकमध्ये सबैभन्दा बढी तानसेन नगरपालिकाका मात्र १२ जना रहेका छन् ।
तिलोत्तमालाई मुलुकमैं पहिलो पटक शुन्य पोलिथिन नगर घोषणा गरिँदै
सैनामैनामा कृषि पाठशाला कार्यक्रम